निशा उता, फिल्म यता - मनोरञ्जन - नेपाल
निशा उता, फिल्म यता
केही महिनायता हिरोइन निशा अधिकारी अमेरिकामा थिइन् । त्यहीँ उनलाई पुत्रलाभ भयो, ४ जेठमा । त्यसको दुई दिनपछि उनी अभिनीत फिल्म कुम्भकरणको ट्ेरलर रिलिज भयो । र, प्रदर्शन मिति तोकियो, २२ असार । फिल्मकी एक्ली हिरोइन हुन् निशा । उनकै अनुपस्थितिले प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिहाल्छ । कतिसम्म भने, डबिङ नगरिएकाले ट्रेलरमा निशाको संवाद राखिएन । यस बीचमा नेपाल आएर डबिङ गर्ने सम्भावना पनि रहेन । फिल्मको सुटिङ सकिएको वर्ष दिन बितिसक्यो । तर, डबिङ भएन । गल्ती कसको ? निशा वा फिल्म युनिट ? उनीहरु नै जानून् । तर, नोक्सान दुवैलाई पर्ने देखिन्छ । त्यसो त कुम्भकरण मात्र होइन, निशा अभिनीत पोखराकी काली पनि प्रदर्शन हुन बाँकी छ ।